Andro: 12 mey 2020
Tokony hiaro ny indostrian'ny fiaramanidina isika
Manambara fa ny fivoarana eo amin'ny indostrian'ny fiaramanidina dia misy fiantraikany ratsy amin'ny fanondranana entana, hoy ny filoham-pirenena Eskişehir OIZ Nadir Küpeli: “Ny fiantraikan'ny indostrian'ny fiaramanidina sivily dia nanjary nisy fiantraikany tamin'ny fanondrananay, ny indostrian'ny fiaramanidina, izay mason'ny orinasa Eskişehir. Fiarovana sy [More ...]
Manomboka ny fanisana ho an'ny sidina indray ao amin'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen
Istanbul Sabiha Gokcen International Airport (Osh), Covidien-19 manerana an'i Torkia ao anatin'ny faritry ny fepetra noraisina noho ny valan'aretina tamin'ny 28 Martsa am-baravarana toy ny hoe mba hanome vetivety manaiky ny manam-pahefana araka ny fiatoana eo amin'ny fanompoana 28 [More ...]
Tao anatin'ny fanambarana nataon'i TCDD, voalaza fa hatao ny fandefasana ny lalamby ary ny adiresy voafaritra mandritra ny 10 andro dia tsy tokony hohatonina. Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD), teo anelanelan'ny 14 May ny 1 Jona 2020 ny Jeneraly Tale ny daty; Konya-Akşehir, [More ...]
Fanaraha-maso hentitra ny tranoben'ny tranombarotra sy ny tsenam-bahoaka any Ankara
Ny ekipan'ny polisy sy ny sampana ara-pahasalamana ao Ankara Metropolitan sy ny departemanta misahana ny fahasalamana dia nanamafy ny fisavana azy ireo taorian'ny fisokafan'ny tranoben'ny tranombarotra sy Public Markets, izay nikatona vonjimaika noho ny fepetra nataon'ny coronavirus hatramin'ny 21 martsa. olona [More ...]
Mitohy ny fanohanana ny fahadiovana ho an'ny mpivarotra Dolmuscu ao Ankara
Ny Departemantan'ny Polisy ao Ankara Metropolitan dia manohy manohana ireo mpivarotra dolmus izay nihena ny asany noho ny fipoahan'ny coronavirus. Ho fanampin'ny fizotran-disimpia amin'ny minibus, nanomboka ny fizarana parcels hanina noho ny Ramadany i Ankara. [More ...]
2/7 Aspalti-Ozatra ho an'ny fodiana 24 andro eto an-drenivohitra
Tao anatin'ny sakeli'ny ady tamin'ny areti-mifindra coronavirus dia miasa tao amin'ny kaominina Ankara Metropolitan 2/7 amin'ny asfalt amin'ny fiozomana 24 andro nambara tao an-drenivohitra. Manomboka ao Altındağ ka hatrany Çankaya, hatrany Etimesgut ka Yenimahalle, eo amin'ny teboka 52 an'ny tanàna [More ...]
Coronavirus tsy raisina ho toy ny lozam-piasana
Eskişehir Chamber of Legal Legal Ministry dia nanomana tatitra momba ny sata ara-dalàna momba ny sata ara-dalàna ny olona iharan'ny fihanaky ny koronavirus. Ao amin'ny tatitra voaomana, momba ny sata ara-dalàna an'ny olona tratra amin'ny coronavirus any am-piasana na eo ivelan'ny toeram-piasana. [More ...]
Voazaha ho an'ny fitaterana salama
Kayseri Metropolitan Municiel de police monisipaly sy fanazavana momba ny fanarahana ny fepetra coronavirus dia mitohy tsy miadana. Nampandrenesin'ny ekipan'ny polisy ny mpamily fiarakaretsaka. Ny ekipan'ny polisy Metropolitan dia mandray fijanonan'ny taxi [More ...]
Sampana faharoa nosokafana ho an'ny Gültepe ao amin'ny Tranoben'ny olona
Nanokatra ny sampana faharoa an'i Halkın Bakkalı i Kazmir Metropolitan, izay napetraka tao Kemeraltı Bazaar, ao amin'ny Distrikan'i Gültepe Konak. Ny filoha Tunç Soyer nandritra ny fanokafana niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ny olom-bitsy vitsy noho ny fepetra coronavirus: «tena fototra [More ...]
Fahalianana lalina amin'ny fampirantiana sinema any ivelany! Tapitra ny firaketana an-tsoratra tamin'ny 19 segondra
Nahasarika ny saina ny sinema nasain'i byzmir Metropolitan Munisipaly tamin'ny zoma 15 mey. Vita ny fanoratana anarana tao anatin'ny 19 segondra tao amin'ny hetsika izay handefasana ilay sarimihetsika “Dealer Meeting” miaraka amin'ny isa enina. hetsika [More ...]
Zon'ny fitateram-bahoaka malalaka ho an'ny zokiolona sy mpiambina ny morontsiraka
Ireo mpiasan'ny zandarimaria sy ny mpiambina ny morontsiraka dia nampidirina tao amin'ireo nandray soa tamin'ny fitaterana olona maimaim-poana. Ny didy navoakan'ny filoham-pirenena dia nanomboka tamin'ny 8 May. Zandarimaria sy ny fampiharana ny lalàna Coast ny mpifehy, izay mahazo maimaim-poana fampiasana ny fitateram-bahoaka ao Torkia [More ...]
Tontolon'ny mpitsabo 573 arivo 750 no voasambotra tao amin'ny vavahadin'ny Kapıkule Border
Nandritra ny hetsika izay nataon'ny ekipan'ny Ministeran'ny varotra ao amin'ny vavahadin'ny Kapıkule Customs, dia mason-tsolika fiarovana 8 arivo 800 izay mitentina 573 tapitrisa 750 XNUMX ny litera. Tale jeneralin'ny foibe fanamafisana ny fako [More ...]
Ny filankevitry ny fikarohana ara-tsiansa sy teknolojia any Tiorkia (TUBITAK) dia hampahafantarina mpiasa roa maharitra ao anaty fanambarana iray. Mba hampiharana ny doka, ilaina ny fisoratana anarana amin'ny Rafitra fampiharana amin'ny asa amin'ny "www.bilgem.tubitak.gov.tr". (Manohy ny fangatahana [More ...]
Mpampiasa virus manafika sarintany ny sari-tanin'ny virus
Miara-miasa mba hijanonana ny fihanaky ny valanaretina amin'ny ho avy ny "World's hunters virus" amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fametahana ny otrik'aretina rehetra amin'ny bibidia izay mahavita manohatra ny olombelona amin'ny bibidia. Fikambanan'ny fiaraha-miasa siantifika antsoina hoe Global Virome Project [More ...]
Fampitandremana Coronavirus ho an'ny marary marary
Profesora Dr. Timurkaynak nilaza hoe: "Tokony hitandrina ny tosidrany sy ny siramamy izy ireo. Ny fanasana matetika ny tànana dia tsy maintsy. Ny fitazonana ny hery fiarovana, ny torimaso tsy tapaka, ny sakafo mahasalama, ny sakafo mifototra amin'ny sakafo any Mediteraneana, ny alikaola tafahoatra [More ...]
BTS: 'Tsy hangina izahay amin'ny famindrana ny faritra Port Port Sirkeci mankany Yeşilay'
Nanambara ny United Transport Employees Union (BTS) fa ny lalana mankany amin'ny seranan-tsambo sy ny faritra maneuver izay ampiasaina amin'ny faritra Sirkeci Port sy ny sehatr'asa ampiasaina dia nahatratra ny dingana farany amin'ny fiomanana amin'ny protocol. Birao Mpanatanteraka BTS Central [More ...]
Hiran'ny Hitanao vahiny? 2019-2020 Hira vahiny?
Anisan'ireo hira vahiny natomboka, misy ireo hira izay mahomby. Ny hira vahiny, na dia tsy hainao aza ny dikany, dia afaka manana mozika mampihetsi-po sy mampihetsi-po tokoa. Noho izany, ny ankamaroany dia vahiny [More ...]
Tellsakir Zümre nitantara ny fahatsiarovany ny Atatürk
Notakir Zümre dia tsy nanoratra tamin'ny an-tsipiriany ny fitadidiany. Angamba tsy nahita fotoana hanoratany izy. Hadakir Zümre dia nanana fihetsika maotina. Tsy miresaka momba ny fanompoana tany an-tanindrazany izy na ny fisakaizany amin'i Atatürk. [More ...]
Iza moa i Gazi Yaşargil?
Teraka tamin'ny 6 Jolay 1925 izy, tamin'ny naha-Governemanta Distrika an'i Lice, Diyarbakır. Ny lafiny renim-pianakaviana dia avy amin'ny ranomasina mainty ary ny lafiny an'ny ray dia miankina amin'ny fianakavian'i foko Kayhan izay nipetraka voalohany tany Beypazarı. Asım rainy rainy dia teraka tany Diyarbakır tamin'ny 1924. [More ...]
Taratasy avy amin'ny Tilikambo Galata mankany amin'ny Minisitry ny Kolontsaina ary ny fizahan-tany Ersoy avy ao Imamoglu
Ny Filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia namoaka taratasy mahakasika ny fanapahana hamindrana ny Galata Tower, izay fananan'ny monisipaly, ho an'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny fizahan-tany. Mazava ny nanoratan'ny filoha Imamoglu an'i Mehmet Nuri Ersoy, minisitry ny kolontsaina sy ny fizahantany [More ...]
EGİAD Mametraka ny toe-karena eo amin'ny latabatra
Ny Association Aegean Young Businessmen Association EGIAD dia nikarakara seminera iray momba ny «Fizahan-jiro Macroekonomika amin'ny ady amin'ny fipoahana» horesahina sy hanombatombana ny vokatry ny valan'aretina Covid19 amin'ny toe-karena. Sekretera jeneralin'ny mpikambana EGİAD [More ...]
Nirongatra ny fitsangatsanganana fitateram-bahoaka any Istanbul
Taorian'ny lozisialy Covit-19 dia nanomboka nipoitra, nisy ny fihenan'ny isan'ny olona nandeha teny an-dalana tamin'ny faran'ny volana martsa. Saingy tamin'ny herinandro farany tamin'ny volana aprily, dia mitombo 30,4 isan-jato ny firaketana an-tsoratra raha oharina amin'ny faran'ny volana martsa. Porofon'ny isan-jaton'ny mponina [More ...]
Rahoviana no Hifarana ny garan-dalamby ara-dalamby 42?
Mitohy ny asa any amin'ny biraon'ny Izmit 42 Evler amin'ny tsipika vaovao eo anelanelan'i Arifiye sy Pendik izay ampiasain'ny fiaran-dalamby ambanivohitra. Ny serivisy dia andrasana hanokatra amin'ny volana aogositra. Araka ny vaovao momba an'i Muharrem Şenol avy any Özgür Kocaeli; “Fiaran-dalamby ao amin'ny faritr'i Izmit 42 Evler [More ...]
Ny Fivarotana Asphalt amin'ny Izmit Gültepe Junction dia efa vita
Manohy ny ezaka ataon'izy ireo mba hahamora ny fitaterana manerana ny tanàna, ny Kocaeli Metropolitan Metropolitan no nandrafitra ny vatosoa teo amin'ny kianja nanoloana ny Orduevi teo amin'ny Torondrana Izmit Büyük Seka tamin'ny herinandro lasa teo. siansa [More ...]
Ny fangatahana invoice fampiatoana nanomboka ny Inzmir
Nanomboka noraisina ny fangatahana ho an'ny fampiharana "invoice" miandry, izay natomboka tao Izmir taorian'ny Istanbul. Ireo mpampiasa famandrihana, izay manana fahasahiranana ara-toekarena noho ny areti-mifindra manerantany, dia afaka mamonjy ny volan'ny rano ao anatin'ity rafitra ity amin'ny alàlan'ny tranokala "Biz İzmir". [More ...]